Weedhsan - Muddo-kordhinta Somaliland: Saddex ba Saddex Hal baa seegay! – W/Q. Xuseen Badhaani
Muddo-kordhinta Somaliland: Saddex ba Saddex Hal baa seegay! – W/Q. Xuseen Badhaani
Somaliland waa tan iska noqotay Kordhis-land, tusaale na waxaa inoogu filan golihii guurtidu waxay fadhiyaan 23 sanno, golahii wakiilladuna waxay joogaan 12 sanno, xukuumaddiina
7 sanno. Muddo-kordhintan ugu dambaysay oo lagu sababeeyay in abaarta darteed aanay doorashada madaxtooyadu ku dhici karin waqtigeedii, sababtaas oo ahayd mid macquul ah oo xaqiiqo ah, haddana abaartii cidna uma gurman ee awrka ayuun baa lagu kacsanayay.
Sheekaba sheeko ayay keentaaye, nin Soomaaliyeed oo arrin ku dhacay ka garramayay ayaa laga qoray murti caan noqotay waxaanu yidhi “Saddex ba saddex hal baa seegay, anigana hal ima seegin.”
Muddo-kordhintan shalay saddex ba saddex hal baa seegtay. Golaha guurtida hal baa seegtay, Gud. Cirro hal baa seegay, xukuumadda Kulmiye na hal baa seegtay.
Guurtida hal baa seegtay: Kol haddii shaqadii goluhu ku soo ururay oo ay noqotay muddo-kordhin, inay caqli ku daraan baa seegtay. Waxaa seegtay inay labada doorasho ee madaxtooyada iyo golaha deeggaanka ee isku xeerka ah, isna raaci kara, inay isku waqti ka dhigaan.
Guddoomiye Cirro na hal baa seegtay: Kol haddii uu Gud. Cirro xilka guddoomiyenimo uu soo hayay 12 sanno oo afar jeer oo hore na loo kordhiyay golaha, inuu go’aan qaato ayaa seegtay. Waxa seegtay inuu iska casilo xilkan golaha, una tafaxayto ollole doorasho, maadaama uu yahay musharrax madaxweyne, ahna guddoomiye xisba mucaarid.
Xukuumadda Kulmiye na hal baa seegtay: Kol haddii muddo-kordhintii loo sameeyay, xisbiyo mucaarid oo adagna aanay jirin, goleyaashii sharci-dejintana ay hantiyeen, meel itaal idin dhigaba, dadkiinna la dareen noqda oo u gurmada ayaa seegtay.
Inta ay wasiirradii badankoodu ku mashquulsan yihiin saldhigga Military saxeexiisa, dooddiisa iyo difaaciisa, waxa seegtay:
o Inay bulshada xoolodhaqatada abaartu halakaysay u sameeyaan gurmad hagaagsan.
o Inay iibkii adhiga ee dawladda aynnu xulafada dagaal nahay ee Sucuudigu xidhay kala soo xaajoodaan.
o Inay sicir-bararkan halkiisii ($1 = 8500) ku noqday xal toolmoon u raadiyaan.
Anigana hal baa i seegtay: Malaha waxa i seegtay iska aamus oo shibta ka gal. Laakiin ujeedkaygu waa intii Abwaan Hadraawi sheegay ee uu yidhi:
“Gubuxsiga mar uun bay tirsiga, meel ka soo galiye
Gargaraacisteediyo ha dayn, geed ka didinteeda.”
Aqoon haygu cadaabin.
Facebook: Xuseen Badhaani